HERO OF MYANMAR: ဒေါင်းမလေး လှပရဲ့ ဒါပေမယ့်ကွယ်...... (How pretty you are ! Pea-hen.......But)
ဒေါင်းမလေး လှပရဲ့ ဒါပေမယ့်ကွယ်...... (How pretty you are ! Pea-hen.......But)
[16:00 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
How pretty your dancing at the front view !
At the back side , everybody knows that she can’t take her shame. Like that, today in the world, without finding self weak-point and shame, there are many countries which see someone’s weak-points intensively. They don't cover their shame. They pointedafinger at the other's shame and guilt. They shouted about human rights, the causes of democracy, terrorist activities, violence and various causes.Then they made pressure and influences and bossed around the internal affairs of other countries. They invaded other countries if those countries did not agree their policy. They were doing such kind of nonsense but they shouted from radio, television that they were right.
In starting to dug out the hiding phenomenon and making the fabricated story, Britain may beahigh boss but they could not make peace their internal affairs . In spite of improving technology, arms and ammunition, the terrorist activities were occuring. The poverty gap, the segregation of races, the segregation of colours and the relationships could not be made conveniently. It was the terrible recklessnessastudent killedaperson by shooting. The sudden demonstrations could not be controlled. If it occured, it spreaded through all over the world . This nation is Britain which is shouting itself asalarge democratic nation.
As you all know, on6August 2011, at Tottenham , northern part of London, Britain, the riot started to occur terribly. It could be thought as an anarchy. That incident started last4August.
Two hundred people started procession and protests. Then protesters were becoming more and more up to terrorist riot. To Birmingham, Liverpool, Nottingham, Bristol region, the riot spreaded through and protests, robberies and violences appeared. The police force suppressed the protesters by using bludgeons. The violence and demonstration were gradually worse. The protesters made the terrorist activities, such as destroying the police vehicles, ignition the department stores, and making robberies . They used petrol buckets, in the city the arsons consecutively occured. It was known all over the world.
Asamatter of fact, in England, it is not strange incidents like this riot. In the previous days, this kind of incident had occured too. In 1985, Broadwater Farm riot had been known all over the world that it was very, serious and terrible. In the Daily Telegraph newspaper, it described that the London riot was only making the crimes and it was the unlawful undertaking. The reporters who went to the incident to get the news from BBC, were beaten. It was proved that the dwellers living in their residential town did not trust and like the BBC reporters who were always made advantages and instigation.
Was it to be said as the retribution or was it the demonstration of the fault done by the so-called the big democrative country? The riot and disturbance were really terrible and frightful. It was the shameful deed among the international communities because of the blind to see own’s fault. As for them, they were not able to control their internal affairs and they encountered the problems and hardships around them. This is just likeapea-hen which mearly knew dancing but did not know its own shame. England, the pea-hen, you are very beautiful really in dancing but the shame(anus) can be seen. This is what I would like to say.
ဒေါင်းမလေး လှပရဲ့ ဒါပေမယ့်ကွယ်......
၁။ ဒေါင်းမလေးကနေတာ ရှေ့ကကြည့်ရင်တော့ လှနေပါရဲ့၊ နောက်ကကြည့်ရင်တော့ သူ့အရှက်တရားက မဖုံးနိုင်၊ မဖိနိုင်လုံးလုံးလျားလျားပေါ်နေတာကို လူတိုင်းသိကြမှာပဲ။ အဲဒီလိုပဲ ယနေ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာလည်း ကိုယ့်ဟာကွက်၊ ကိုယ့်အရှက်ကိုမတွေ့ဘဲ သူတစ်ပါးရဲ့ဟာကွက်ကိုပဲ မရမကရှာကြည့်တတ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေ ရှိတယ်။ ကိုယ့်အရှက်ကိုလုံအောင်မဖုံးနိုင်ဘဲ သူတစ်ပါးရဲ့အရှက်ကိုလက်ညိုးထိုးအပြစ်ပြောတတ်ကြတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ အကြမ်းဖက်အရေး၊ ဆူပူမှုအရေး၊ ပြီးတော့ ဘာအရေး ညာအရေး စုံတကာ့ စုံအောင်ဟစ်အော်ပြီး သူတစ်ပါးပြည်တွင်းရေး၊ နိုင်ငံရေးတွေမှာ ဆရာကြီးဝင်လုပ်ကြ၊ သြဇာပေး၊ ဖိအားတွေ ပေးလေရဲ့။ မထင်ရင်မထင်သလို စစ်ရေးနဲ့ကျူးကျော်တတ်ကြတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်တာကို လုပ်နေပါလျက် သူတို့လုပ်ရပ်ကပဲ လုပ်ရပ်မှန်နေကြောင်း ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားတွေကနေ ဟစ်ကြွေးကြပြန်တယ်။
၂။ ငုတ်နေတာကိုပေါ်လာအောင် အစပျိုးတဲ့နေရာမှာ၊ မဟုတ်တာကို ဟုတ်သယောင်ထင်ရအောင် ကလိမ်စေ့ဉဏ်တတ်တဲ့နေရာမှာ ဆရာကြီးတစ်ဆူဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ပြည်တွင်းရေးတော့ ငြိမ်သက်အောင် မလုပ်နိုင်ရှာဘူး။ နည်းပညာ၊ လက်နက်ကိရိယာ၊ အတတ်ပညာတိုးတက်နေပါလျက် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု တွေ့ကိုခံနေရတယ်။ ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှု၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ အသားရောင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကို ပြေလည်အောင်မလုပ်နိုင်ရှာဘူး။ ရမ်းကားလိုက်တာကလည်း ကျောင်းသားလေးကသေနတ်နဲ့လူသတ်တဲ့ အထိပါပဲ။ ထစ်ကနဲ ထထပြီး ဆန်္ဒပြဆူပူမှုတွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်ကြဘူး။ ဖြစ်လိုက်ရင်လည်း ကမ္ဘာကျော်။ ဒီနိုင်ငံကတော့ သူ့ကိုယ်သူ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးပါလို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံပါပဲ။
၃။ အားလုံးသိကြမှာပဲ ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ လန်ဒန်မြို့မြောက်ပိုင်း၊ တော့တင်ဟမ်းမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၆)ရက်နေ့မှစပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းက ကြောက်ခန်းမလိလိ၊ မင်းမဲ့တိုင်းပြည်လားတောင် ထင်ရမလောက်ပဲ။ ဖြစ်စဉ်က ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ(၄)ရက်နေ့မှာစတယ်။ လူ ၂၀၀ ခန့်ပါဝင်တဲ့ လမ်းလျှောက်ဆန်္ဒပြမှုတစ်ခုကို စတင်လိုက်တာ ဆန်္ဒပြသူတွေပိုမိုများပြားလာပြီး နောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်တဲ့ အဓိကရုဏ်းအထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ ဘာမင်ဂမ်၊ လီဗာပူးလ်၊ နော်တင်ဟမ်၊ ဘရစ်္စတန် စတဲ့ဒေသတွေကိုပါကူးစက်ခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြမှုများနှင့်အတူ လုယက်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက နံပါတ်တုတ်တွေအသုံးပြုပြီးနှိမ်နင်း ခဲ့တယ်။ ဆန္ဒပြမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာခဲ့တယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေက ရဲကားတွေကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ကုန်တိုက်တွေကိုမီးရှို့ခြင်း၊ ပစ္စည်းလုယက်ခြင်း စတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဓာတ်ဆီပုံးများအသုံးပြုပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြလို့ မြို့တော်အတွင်းမှာ မီးလောင်မှုများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရတယ် ဆိုတာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးအသိပဲဖြစ်တယ်။
၄။ တကယ်တော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ယခုလိုအဓိကရုဏ်းဖြစ်တာတွေဟာ မဆန်းတော့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလို့ဆိုလို့ ရပါတယ်။ ယခင့် ယခင်တွေကလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်က Broadwater အဓိကရုဏ်း တစ်ခု ကလည်း ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကြောက်ခန်းလိလိဆိုတာ အားလုံးအသိပဲဖြစ်တယ်။ Daily Telegraph သတင်းစာကလည်း လန်ဒန်အဓိကရုဏ်းသည် ရာဇ၀တ်မှုများကိုပြုလုပ်နေခြင်းသာဖြစ်ပြီး ဥပဒေနှင့်ကျူးလွန်နေ ကြသောလုပ်ရပ်များဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြသည်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်။ သတင်းဌာနဆိုလို့ အဲဒီအဓိကရုဏ်း သတင်းကိုရယူဖို့သွားတဲ့ ဘီဘီစီသတင်းဌာနက သတင်းထောက်တွေ ရိုက်နှက်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါသည်။ နေရာတကာဖွဖို့၊ ပွဖို့ပဲကြိုးစားနေတဲ့ ဘီဘီစီသတင်းသမားတွေကို သူတို့ဒေသခံတွေကတောင် မယုံဘူး၊ မကြိုက်ဘူးဆိုတာကို သာဓကပြလိုသလိုပါပဲ။
၅။ ဒါဟာ ကာလ၀ိတ်ဘတ်နောက်ပိုးတက်တယ်ပဲပြောရမလား၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ အမှားသရုပ်ပြ လို့ပဲဆိုရမလား။ အကြမ်းဖက်မှုအဓိကရုဏ်းက ကြောက်စရာကောင်းလှပါဘိ။ သူများမျက်ချေးသာမြင်ပြီး ကိုယ့်မျက်ချေးကိုယ်မမြင်နိုင်တော့ လူပုံအလယ်မှာ အရှက်ကွဲရပြန်တယ်။ ကိုယ့်ပြည်တွင်းရေး ကိုယ်တိုင်မထိန်း နိုင်တော့ အရူးမီးဝိုင်းခံရသလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။
၆။ ကဖို့သာသိပြီး ကိုယ့်အရှက်ကိုလုံခြုံအောင်မဖုံးနိုင်ရှာတဲ့ ဒေါင်းမလေးလိုဖြစ်ခဲ့ပြန်တယ်။ အင်္ဂလန်ဆိုတဲ့ ဒေါင်းမလေးရေ လှတော့လှပါရဲ့ ဒါပေမယ့် ဟိုအ၀ှာပေါ်နေတယ်လို့သာ ဆိုလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။